WBOn GARAACHA BIYYAA Keessatti Lolee Baabsaa (Partner in Crime) Biyya Alaa Oromoo fi Addunyaa Mara Biratti Saaxilee Fashalsa!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWBOn GARAACHA BIYYAA Keessatti Lolee Baabsaa (Partner in Crime) Biyya Alaa Oromoo fi Addunyaa Mara Biratti Saaxilee Fashalsa!!
PM Abiy Ahmed yeroo president Eritrea Esaayyaas Afeworki waliin Somaalee, Keeniyaa fi Sudaan Kibbaa naannawaan, akka lola WBO irratti deemsiisaa jiru irratti, gargaaran gaafate.
Gaafa Dr Abiy Ahmad president Eritrea Esaayyaas Afeworki waliin Somaalee, Keeniyaa fi Sudaan Kibbaa irra naannawaa ture akka jarri waa xaxaa jirtu WBOn bira gahee sanaaf of qopheesse. Akka Abiyi kadhaa gargaarsaaf deddeemaa turee fi akka Esaayyaas Afeworqi kanatti waan muxannoo durii durii qabuuf fudhatee deemmataa tures barre.
ODEEFFANNOON amma bahaa jiru Waraanni Sudaan Kibbaa karaa Dhiha Oromiyaa fi Waraanni Keeniyaa karaa Kibbaa akka WBO lolan akka waliif galani himti. Bitamtooti (Mercenaries) kan Eritrea illee sana keessaa akka qooda fudhattu shakkuu dha.
AANJAA WBO & FAFA DIINAA:
Goobanooti OPDO lolichi DAANGAA irratti waan murtaawe seete. Wallagga 4n alatti WBOn Shawwaa, Ilubbaabor, fi Jimma keessatti akka gaariitti of ijaaree socho’aa jira. WBOn akka Bara SPLA (loltoota Sudaan Kibbaa) duraan daangaa irratti lolaa ture sana ta’a jettee DIINNI 4n yaaddee ti. Amma haalli lolaa hundi wal adda:
(1) Barri 1980s fi barri 2019 adda adda. Amma WBOn dallaa mootummaan waraanaan daangaatti dhiheessee ijaare cabsee garaacha biyyaa keessa socho’aa jira.
(2) WBOn 1980s keessa ummata keenyaa alatti kophaa lolaa ture. Ha’r’a garuu ummata Oromoo gidduutti lola. WBOn amma ammoo kophaa lola osoo hin taanee QEERROO, Ummata Oromoo, Humna Ittisa Ummataa, fi dachee Oromiyaa waliin lola.
(3) WBOn 1980s keessa Duubbee irraa tiksu qabaaf lola dhaabbataa (conventional warfare) deemsisee SPLA fi DARGII lolaa ture. Amma garuu sana hin qabu. Duubbeen WBO akka kan warra China Mao Tse-Tung durii sana socho’aa (fluid) dha. Bakkuma inni filatetu isaaf DUUBBEE dha. Ummati Oromoos duubbee WBO ti.
(4) WBOn ummata isaa fi dachee isaa keessatti lola. Waraanni Kibba Sudaanii, Eritrea fi Keeniyaa garuu daangaa orma biroo seentee waan loltuuf hundumatu QOREE itti ta’ee yeroo mara marfama keessa sodaan sochooti. Rukuttaa cimaa in amileen cabdee lolichi fashala. Akka cabaniinis facaanaan walitti deebi’uuf deebisanii of ijaaruun ishee rakkisee bakka hundatti Oromootaan daggala keessatti akka booyyee waraanamtee dhumti!
(5) WBOn haqa isaaf biyya isaa keessatti lola. Loltootni orma biyya alaa daangaa ceetee mirga namaa cabsuuf MINDAAF jettee oofamtee osoo hin jaallatin bobbaafamti waan ta’ee akkuma kaampii isee kaateen injifatamtuu dha. WBOn qe’ee isaatti lolu kan KAAYYOOF mindaan malee lolu LOLA XIIQII lolee diin silumaa amilee injifatamuun dhuftu daaraa godha!
LOLICHI COMPLEX POLITICAL REPERCUSSION OPDO, Eritrea, Keeniyaa fi Sudaan Kibbaa keessatti uumuu danda’a!! Eegaa!
WAA’EE WARAANA WARRA BIYYA ALAA:
(1) Waraana Eritrea:
WBOn waraana Eritrea waliin lolees, ishee lolees beeka. Laafinsi Dargii onnee Eritreatti horee amilee mo’uu keessatti ijaare sun har’a hin jiru. Ajajooti waraana Eritrea warri dur lolchiisaa jiran amma DULLOOMANII lafaa iyyuu ka’anii dhaabbachuu dadhabaniiru. Isaaniin lolicha keessaa haqaa. Waraanni Eritrea ammaa akkuma waraana Wayyaanee ammaa ti. Tottoree nyaatamee bututeera. Jireenya sadoo baree ammas sana barbaada. Amilee lolaa hin qabu.
Waraana Eritrea WBOn oggaa isaan waraana Tigree waliin lolaa turan (1991-1998tti) isaan lolee beeka. Booji’ees ID Card isaanii harkaa guuree beeka. Amma kan Goobanoota OPDO gargaaruu dhufu waraana quality dhaan san duraa sanaa gadii ti. Eritrean waan waraanni ishee afaan Tigree haasoftuuf tarii karaa lama bobba’uu malti. Tokko Waraana RIB waliin humna Mechanized taatee ti; kuni dafee adda waan baafamuuf WBOn dafee rukuttaa cimaan jiilchee akka isheen lammata hin lolle godha. Kan biroo loltooti Eritrea karaa Kibba Sudaan humna Mechanized taatu bobbaafamuu malti. Eritrean waan loltooti SPLA baay’ina qaban isaan tiksan itti fakkaata. WBOn kukkutee diina loluun bakka waraanni Eritrea jiru adda baafatee rukutee adaba laalessaa irraan gahuu danda’a.
Waraanni Eritrea waan afaan Tigree haasoftuuf Oromoon dafee adda baafatee haleelee dhabamsiisuu danda’a! Facaatus adamsamtee akka bosonuu Oromoon waraanamtee dhumti!
WBOn akka lolicha dheeresseen Waraanni Eritrea nuffuu fi amileen kufuutu dhufa. Mootummaa isaanii abaaruu fi maatii isaaniitti himachuun rakkoo siyaasaa Eritrea keessatti dhalchuu danda’a.
Rakkoo bara baraa Eritrean ittiin gaabbitu ni dhufa. Ummatni Oromoo badii Eritrean duraan Wayyaanee bira dhaabbattee WBO dhabamsiisuu irratti gargaarteef kan waajjira ABO baneef dhiifama godheefii ture ni haqa. Ummati Eritrea Oromiyaa keessa akka fedhe socho’ee akka hin dalagne; hariiroon Eritrea fi Oromoo gara fuul duraa akka cutu taasisa. Abaaramtichi Esaayyaas Afawarqii akkuma gaafa Wayyaaneen itti galagaltee tumte dubbate sana ammas STRATEGIC MISTAKE goone jedhee gaabbaa hafa. Oromoon lammata dhiifama Eritreaf gochuuf hin taa’u.
(2) Waraana Sudaan Kibbaa:
WBO humna xiqqaan illee waraana SPLA sadarkaa Birgeedii irraa qabee hamma Kutaa Waraanaan sochootu lolee injifataa ture. Kan lolu HAQA ykn. KAAYYOO dha waan ta’eefi. Amma ammoo Oromiyaa keessatti lola waan ta’eef WBOn humna guddaa kan itti dabalaa deemuun SPLA loluuf deema.
Waraanni SPLA tooftaa lolaa hin beektu. Hashiishaan machaa’anii lolu. WBOn kan qiyaafatee funaanee fixuu danda’a. Hashishni hin lolu. Kan lolu Kaayyoo fi dhugaa (HaQA) dha. Akkuma waraana Eritreaa irratti kaafne waraanni SPLA bifaan GURRAACHA waan taateef kan biroo irraa adda baafamtee hordofamuu fi rukutamuun salphaa dha. Yoo rukutamtee facaates qawwee qofa osoo hin taanee akka booyyee eeboon Oromoon adamsee badduu baasa.
WBOnis Sudaan Kibbaaf dugda ishee deebisuu danda’a!!
(3) Waraana Keeniyaa:
Waraanni Keeniyaa seenaa fi uumamaan akka Amhaaraa LUGNA! Kan shakkamu yoo humna Mechanized Eritrea waliin bobba’e hamma bakki Eritrean jirtu beekamee WBOn rukututti qofa wir-wir jechuu malti. WBOn iddoo Eritrean irra sochootu manii godhatee yeelalchuu dha.
Waraanni Somaalees karaa Keeniyaa fi Liiban waa wir-wir jechuu malti. Oromoon karaa sanaa waan Somaalee lolee beekuuf akkaataa of irraa itti qolatu ni beeka. Gujii fi Booranni Keeniyaas ta’e Somaalee loluu bara dheeraaf itti beeka. Lamaanuu bara dheeraaf lola Somaaleen fi RIB Ethiopia itti bobbaaftu lolaa ture. Kan sana irraa olii waan fidan hin qabani. WBO fi Gujii fi Booranni wal gurmeessee lola gama daangaan banamu lolaa Humni WBO irra guddaan gara garaacha Oromiyaa keessatti loluun akka dhageettiin lolichaa Addunyaa mara gahu taasisa.
Waraana Kikkuyyuus Oromoon adaba isheen agartee hin beekne kennuufiif deema.
Gaarummaan LOLA kanaa akka BOORANNI Oromiyaa fi Keeniyaa Keessaa Tokko ta’ee lolu godhuuf deema. Biyya keeniyaa keessatti jeeqama siyaasaa uumuu mala. Ummatni Booranaa Keeniyaa keessaa ka’anii obbolaa isaa Booranaa Oromiyaa keessaa kan GADAA tokko jala waliin jiraatu kaasee akka tumsanii lolan gochuu mala.
Mootummaa Ethiopia kan OPDO:
Lolli Abiy Ahmad humna alaa gargaarsifatee WBO loluuf qindeessaa jiru KUFAATII mootummaa isaa ariifachiisuuf deema. Namni yoo maraate malee saba bakkan bu’a jedhu Oromootti (Oromoo miti jedhu garuu) takkaa daboo ormaa hin kadhatu. Silaa erga ofii fi kan ofiin dadhabee dhiisuu qaba ture. Kan Abiy Nafxanyoota Amhaaraa kadhatee WBOtti duulchise iyyuu akka inni Oromummaa hin qabnee fi diina Oromoo ta’e isa saaxile!
Amma Abiy gurbaan daandii irraa qabamee Wayyaaneen guddifte kun WBOtti orma alagaa kadhachuun akka OROMOON bakka hundumaa itti ka’u taasisa. Qeerroon tokkoomee OPDO kuffisuuf sochii wal irraa hin citne godha. DHAABI OPDO akka isheen caccabdee wal hirtee laaffattuu fi akka Amhaarri aangoo ishee irraa fudhatu kakaasuu mala! Kumoota hedduudhaan yaa’ee WBOtti makamee loluuf deema. Akka WBOn lola isaa gara FINFINNEETTI dhiibee morma qabee Dr Abiyiin baasu godhuuf deema!! EEGAA!!
Odeeffannoo akka Abiy Ahmad baabsaa gargaarsa waraanaa ilmaan kee WBOtti Eritrea, Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, fi Keeniyaa kadhatee jiru mana Oromoo maraan gahi. Daddabarsi.
Lola hamaa sabummaa Oromoo dhabamsiisuuf aggaammatame kana XIIQII fi JAGNUMMAA abbootii keenya irraa dhaalleen lollee fashalsuu fi diina keessaa fi alaa mara qaanessuuf qophii hunda xumuri.
Qeerroon bakka jirtuu xiiqiidhaan obboloota kee si biraa bosonatti waggaa 4n kana galanii wBO ta’anii lolaa jiranitti dabalamuuf qophii ta’ii taa’i.
Oromoon marti diina adamsee ajjeesee irraa hiikkatee HUMNA GAANFA AFRIIKAA Sodaatamu ta’uun ROORROO mara of irraa fi saboota cunqurfamoo olloota keenyaa maraa irraa kutuuf sochii wal irraa hin citne godhuun amma!!
Haqa qabna; daangaa nutti darbani; ni moona!!
INJIFANNOON UUMMATA OROMOOF HAA TA’U
Abiy gurbaan daandii irraa qabamee Wayyaaneen guddifte Kun aangoo dhiiga oroomoo heeddun itti dhangala’e kana dhandhamachuunsaa asumarratti dhaaba